Cunto: Sababtoo ah Sababta Ugu Sarrifsan ee SEO ma Waari Karaan Habeenka
Waxaa jira faafin caadi ah oo dadka dhexdooda ah oo aan fahminSEO-yada wakaaladaha SEO ayaa kaa dhigi kara guulo habeenimo ah. Wakiiladu waxay ballan-qaadi karaan inay kugula talin doonaan bogga hore ee Googlenatiijooyinka raadinta isla markiiba. Si kastaba ha ahaatee, halkan waa runta adag: iyadoon loo eegin sida hay'ad SEO ah ay tahay, ma xaqiijin karto natiijo deg deg ah.
Dadku waxay badanaaba khalad sameeyaan marka ay ka fakarayaan in gawaarida raadintaHagaajinta (SEO) waxay beddeli doontaa website-kooda habeenkii. Dabcan, waa run in SEO ay leedahay suurtagal ah in ay saameeyaan goobtaada laakiinwaa muddo dheer. Runtii ugu xiisaha badnayd ee SEO ah ayaa marar dhif ah u sheegaysa in habka kaliya ee lagu riyaaqo dhammaan faa'iidooyinka SEO-ga waa in ay dulqaad iyo fahmaanisku dhafka arrimaha, taas oo waxtar u leh SEO
Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Sare ,Adeegyada Digital, Igor Gamanenko wuxuu sharaxayaa runta ugu muhiimsan ee SEO ee aad u baahantahay.
SEO waa isku dhafan
Waxaa jira arrimo badan oo ciyaaraya ka hor inta aanad goobtaada ku sugneynKa hel bogga natiijooyinka raadinta Google ee sidoo kale loo yaqaan SERPs. Guud ahaan, Google waxay leedahay in ka badan 200 oo calaamado ah,kuwaas oo had iyo jeer isbedela. Adigoo si joogto ah u shaqeynaya mid kastoo ka mid ah, waxaad ku boodi doontaa weelasha kala duwan iyo tijaabinta si aad u aragtoMaxaa keena natiijooyin fiican iyo waxa aan ahayn.
Mid ka mid ah waxyaabaha sarreeya ee sareeya bogagga natiijada GoogleWay adag tahay in Google uu ku badalayo algorithms iyada oo aan shaacin isbeddellada. Marka Google gawaarida algorithms-ka, marar dhif ahku dhawaaqa dadweynaha. Sidaa darteed, khabiiro SEO ayaa la yaabi doona waxa si fiican u noqon doona iyo waxa aanay noqon doonin.
Markii isbeddelka algorithm isbedelo, khubarada SEO ugu fiican ayaa soo ururiyaxogta laga helo goobo badan si loo falanqeeyo wixii isbeddelay..Marka ay falanqeeyaan xogta, waxay samaynayaan go'aano aasaasi ah oo ku saabsan wixii isbeddelayiyo sida looga jawaabayo isbedeladaas.
SEO waa labadaba Sayniska iyo Farshaxanka
Waxbarashada SEO-da waxay u baahan tahay waqti badan oo la shaqeeyoiyo waxbarasho adag. Halkan, waa inaad maamushaa xisaabteynta website-ka iyo sameysaa content-Google saaxiibtinimo. Labadan arrimood waa tiirarka samaynta SEOSi kastaba ha ahaatee, kakanaa, ma jiraan wax yar oo lagu kobcin karo dunida digital.
SEO waa waqti dheer
Bogga hore ee Google waa bartilmaameed joogto ah.Taas macnaheedu waxa weeye in aysan jirin wax damaanad ah in tartamayaashu ay helayaan darajada sare ama haddii kale. Hadda, aad fahamsan tahay sababta SEO waa mid adag oo qaadataaWaqtiga si aad uga shaqeyso. Sidaa darted, sideen u sameeynaa hadafyo dhab ah si aan u helno natiijooyin mudnaan leh, natiijooyin mudo dheer soconaya?
Marka aad bilowday inaad fiirisid SEO ah oo ah hadaf muddo dheer ah,waxaad horay u heshay bilawga madaxa. Si loo aasaaso aasaas wanaagsan, maskaxda ku hay in SEO-ku kaliya ka shaqeeyo ujeedooyinka muddada dheer.Si aad u sameyso wax ku ool ah, isku xir xiriirintaada SEO si aad u wado gaadiidka badan ee goobtaada iyo inaad iibsato iibsasho dheeraad ah muddo cayiman.
SEO wuxuu u baahan yahay maalgashi
Great SEO waxay u baahan tahay maalgashi xoogan wakhtigaaga iyokhayraadka Markaad waqti gashid, dadaal iyo ilo dhaqaale, waxaad heli doontaa soo celinta dhismaha dhammaadka maalinta
Himilooyinka SEO ayaa isbedelaya
Maaddaama SEO ay tahay arrin isdabajoog ah oo kobaca ganacsiga,ma jirto hab aad u horumariso qorshe xaalad ah. Si aad u sii wadato, dib u qiimee SEO-gaaga sannad walba. Wixii natiijooyin wanaagsan, tixgelidib-u-qiimeyn ku sameeynta quarterly.
Haddii aad shaqaaleysid shirkad SEO ah oo lagu kalsoon yahay, waxay sameyn doonaankugula socodsiinayaan in aysan bixin karin natiijooyinka habeenkii. Marka aad sameysatid xeerarka ka qaybqaadashada, ku hayso khadka furan ee isgaadhsiintaku saabsan rajooyinka iyo natiijooyinka si looga fogaado ismaandhaaf la'aanta. Inkastoo SEO aysan ahayn habka habeenimada ah, waa wax aad tahay inaad maalgashato ilaa tanNatiijooyinka waxay u qalmaan dadaalka. Marka aad dejisid filashooyin macquul ah oo aad fahamsan tahay sida ay u shaqeyso, waxaad ku jirtaa habka saxda ah ee aad u heshosida ugu fiican ee lagu soo celiyo maalgashiga SEO Source .